यी डिजाइनरले मोडललाई पाइन्ट खोल्न समस्या भए मोडलिङ हैन मन्दिर जानुस भनेपछि...
एजेन्सी, फेमस डिजाइनर कार्ल लजेरफेल्डले एक विवादित बयान दिएर धमाका मच्चाएका छन् । उनले भने कि यदि मोडलहरुलाई पाइन्ट खोल्न समस्या हुन्छ भने उनीहरु यस क्षेत्रमा नआउँदा हुन्छ । यो कुरा उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। वास्तवमा उनी मी टू कम्पनीबाट दुखित भएर यस्तो कुरा भनेका हुन् । एडेलको तौल देखी लिएर किम कार्दशियनसम्म विवादित टिप्पणीहरुलाई लिएर चर्चामा रहने यस डिजाइनरले भने कि उनी #MeToo आन्दोलनबाट अहिले दिक्दार भएका थिए । साथै उनले युवा मोडलहरुलाई यौन उत्पीड़नबाट बचाउनको लागी नयाँ नियमको आलोचना पनि गरेका छन् । उनले युवा मोडलहरुको सुरक्षामा अपनाइएको उपायलाई गलत बताएका छन् ।
यो नियम फोटो स्टूडियोंमा फोटो सेशनलाई लिएर बनाईएको थियो । एक मोडलले भनिन् कि ” मैले पढेको छु कि पोज दिनु भन्दा पहिले मोडलसँग सोध्नु पर्दछ कि उनी सहज महसूस गर्दै छ या छैन ।” कार्लले यस कुरालाई पनि नकार्दै शुटिङको समयमा बिना मन्जुरी एक मोडलको अन्डरवेयरको तस्विर लिने कार्ल टेम्पलरलाई उद्दार गरिरहेका छन् । मोडलको अन्डरवेयरको तस्विर खिचेको घटना फेब्रुअरीमा आएको थियो । यस कुरामा कार्लले मोडलसँग कुरा गर्दै भने कि यदि तपाइलाई पाइन्टको खोल्न समस्या हुन्छ भने तपाई मोडलिङमा नआउनुहोस् । तपाईको लागि मन्दिर नै ठिक हुन्छ।”
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख ०३, २०७५१८:०९
२५ हप्ते गर्भवती भईन अभिनेत्री युना उप्रेती, अमेरिकाबाट यस्तो सन्देश लेखी व्यक्त गरिन् मातृत्व सुख
सलिनको ‘यात्रा’ को टिजर सार्वजनिक [भिडियो]
“सेक्स टेप लीक हुदाँ रेप भएको जस्तो महसुस भएको थियो”
साउथ चलचित्रकी यी ४ अभिनेत्रीहरु स्कुल ड्रेसमा देखिन्छ निकै बोल्ड र सेक्सी !
बलिउडकी सेक्सिएस्ट यी अभिनेत्रीले ब्ल्याक बिकिनीमा लगाइन आगो, तस्विर सहित!
आज अभिनेत्री आलिया भट्टको जन्मदिन, कति बर्ष पुगिन त?